Akụkọ - Ugboro abụọ ahịrị diamond egweri iko Wheel
Mgbe ọ bịara egweri wheel maka ihe, ị nwere ike iche turbo iko wheel, wheel akụ iko, otu ahịrị iko wheel na ihe ndị ọzọ, taa, anyị ga-ewebata okpukpu abụọ n'ahịrị iko wheel, ọ bụ otu n'ime wiil iko diamond kacha arụ ọrụ nke ọma maka igwu ala sink. N'ozuzu nha ndị anyị na-emepụta bụ 4 ", 5", 7", grits 6 # ~ 300 # bụ nhọrọ, ịdị elu nke akụkụ bụ 5mm, anyị na-ahazi njikọ dị iche iche na ihe ị na-egweri. Ndị na-ahụ maka arbor izugbe bụ 22.23mm, M14, 5/8″-11.
Tụkwasị na nke a, biko hụkwuo atụmatụ nke wheel cup okpukpu abụọ dị ka n'okpuru:
Ọ dị mfe ịrụ ọrụ: wiil ndị na-egweri diamond dị mfe iji rụọ ọrụ na ịwụnye, nke kwesịrị ekwesị maka ndị na-egweri na nkuku; Biko soro ntuziaka n'iji ntụ ọka na igwe ihe n'oge eji iji zere ihe mberede
Ngwa ngwa sanding arụmọrụ: n'ịdị elu nke 5 mm, a na-emepụta onye na-akwado okpukpu abụọ nke brazed maka ngwa ngwa na nke dị nro, ma ọ bụ maka mmiri mmiri ma ọ bụ akọrọ, wiil diamond nwere oghere ikuku nwere ike inye aka ịnọgide na-enwe ma mee ka usoro ịkpụ ahụ dị jụụ iji belata ike ọgwụgwụ. , melite arụmọrụ ọrụ
A na-etinye ya n'ọtụtụ ebe: wiil ndị a na-egweri dị mma maka ụdị nkume dị iche iche, nke enwere ike itinye maka nkụ ma ọ bụ mmiri mmiri nke ihe, granite, marble, ceramic tile, masonry na ụfọdụ ihe ndị ọzọ na-ewu ụlọ, na-eme ka elu na-adịghị mma ma wepụ flash.
siri ike na nke siri ike: nke ejiri ígwè na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na nnukwu ntinye nke diamond, wiil ndị a na-egweri diamond ndị a bụ nchara na corrode na-eguzogide ọgwụ, ọ dịghị mfe imebi, wepụ ihe ngwa ngwa.
Ntinye uche diamond dị elu maka ogologo ndụ yana iwepụ ihe ike
More segments chepụta karịa nkịtị iko wiil nke na-enye ohere ọ nwere ogologo oge na-arụ ọrụ ndụ
Nabata teknụzụ nguzozi dị ike maka wiil iko, ya mere ọ nwere ike idowe nguzozi ozugbo ọ na-egweri n'okpuru ọnọdụ ntụgharị oke ọsọ.
Ụdị njikọ dị iche iche dị ka ọ dabara na igwe ihe nkuku dị iche iche
Ọ bụrụ na ị ga-achọ ịmatakwu wiil iko diamond ndị ọzọ, biko lee webụsaịtị anyị www.bontai-diamond.com.